ပါးကွက်လေး နဲ့ ပုရိသတွေ ကို ဖမ်းစားလိုက် တဲ့ မျက်ဝန်း – Let Pan Daily
မြင်သူ တိုင်းငေးလောက် တဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်း အလှကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မော်ဒယ်လ်မျက်ဝန်း ကို သိကြမယ် ထင်ပါတယ်နော်။ မော်ဒယ်လ်လောကကိုဝင်ရောက်တာ မကြာသေးပင်မဲ့ ပရိသတ်အများအပြားရဲ့အားပေးဝန်းရံမှုကို တဖြည်းဖြည်းရရှိလာတဲ့ မော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ် ယောကျာ်းလေး ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝန်းရံအားပေးမှု ရရှိထားတဲ့သူမကတော့ social media လောကမှာ နာမည်တစ်လုံးနဲ့ ရပ်တည်နေသူ တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ပုံလေးတွေတိုင်း မှာ မော်ဒယ်မျက်ဝန်း တစ်ယောက် ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိနဲ့ လန်းလွန်းနေတာ လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့ ခပ်ချေချရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေးကို ” ပါးကွက်လေးပါ ပျက်သွားတဲ့ထိ တရှိုက်မက်မက် နမ်းမယ့်သူ ??” caption လေးတဲ့ တင်ပေးလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်၊၊ မာ်ဒယ်မျက်ဝန်းရဲ့ အလှပုံရိပ်လေးတွေကို ပရိတ်သတ်တွေ အတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေး လိုက် တယ်နော်
ပုံေလးေတြတိုင္း မွာ ေမာ္ဒယ္မ်က္ဝန္း တစ္ေယာက္ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိရွိနဲ႔ လန္းလြန္းေနတာ လည္းျဖစ္ပါတယ္။သူမကေတာ့ ခပ္ေခ်ခ်႐ိုက္ထားတဲ့ ပုံေလးကို ” ပါးကြက္ေလးပါ ပ်က္သြားတဲ့ထိ တရႈိက္မက္မက္ နမ္းမယ့္သူ ??” caption ေလးတဲ့ တင္ေပးလာတာပဲျဖစ္ပါတယ္၊၊ မာ္ဒယ္မ်က္ဝန္းရဲ႕ အလွပုံရိပ္ေလးေတြကို ပရိတ္သတ္ေတြ အတြက္ ျပန္လည္မွ်ေဝေပး လိုက္ တယ္ေနာ္
ကြည့်ရှု သူများပြားပြီး ချစ်စရာကောင်းလွန်း နေတဲ့ ဆောင်းယွန်းစံ ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး
မို့မောက်လှပတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာ အချိုးအစားလေး ကို ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ “အိချောပို”